ARRIMAHA ARRIMAHA AH: Martin Vrijland
Ben Goertzel Robot-ga Sophia: "Waxaad haysataa 2 doorashooyin ama ku xir AI ama ku noolow dadka wanaagsan"
Filed in WAXYAABAHA ARDAYGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 25 December 2017	• 18 Comments
Ben Goertzel waa khabiir gaar ah oo ku yaal beerta AI. Wuxuu ka qalinjabiyey 19e oo uu haystay shahaadada bachelorka ee Daraasooyinka Quantitative. Sidaas darteed wuxuu bilaabay dhallinyarada badan ee aqoonta xisaabta ka dibna uu leeyahay PhD ah ee xisaabta. Kadibna wuxuu u wareegay cilmi aqooneed iyo ugu dambeyntii wuxuu ahaa [...]
Sida warbaahintu u samayn karto wararka been abuurka ah ee caawimada AI (sirta farsamada)
Filed in WAXYAABAHA ARDAYGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 8 December 2017	• 18 Comments
Si aan u bilowno, waa in aan ka hadalnaa warar been abuur ah oo gacan ka geysta gacan ka hadalka. Waxaad samaynaysaa tan adoo siinaya dadka aad soo qortey oo aad wax u gashay sannado kahor abaalmarin wanaagsan ama tusaale ahaan, hoos u dhigidda jumlado ama aqoonsi cusub (meel fog) iyo u adeegso si aad u hesho warar ku saabsan goobaha [...]
Sidee xarunta Palantir iyo AI saadaalisaa mustaqbalka dhawr sano ka hor
Filed in WAXYAABAHA ARDAYGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 6 December 2017	• 7 Comments
Si aad u fahamto sida loo daweeyo cudur, waxaad u baahan tahay inaad fahamto asaaska dhibaatada. Si aad u fahamtid sida aad ula dagaalami lahayd cadowga, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid oo aad fahamtid sida loo khatarta khatarta soo socota, waa inaad fahamtaa waxa khatartaasi tahay. Sidaas daraadeed waa inaad marka hore heleysaa aqoon [...]
Aasaasaha D-Wave: "Real AI waxay noqon doontaa mid caqli badan dadka iyo dareen ahaan caqli-gal ah"
Filed in WAXYAABAHA ARDAYGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 3 December 2017	• 13 Comments
Geordie Rose, oo ah aasaasaha shirkadda ee dhisay kumbiyuutarada ugu horreeya, D-Wave, ayaa bilaabay shirkad cusub oo dhisi doona 'Real AI'. Tani waa sirdoon farsamo, laakiin heerka ka duwan ee aan la kala saari karin sirdoonka bini'aadamka iyo xitaa ka sarreeya. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay hay'adda [...]
Guud ahaan Wadarta: 1.396.404
guppy op Coronavirus covid-19 iyo sayniska: Sidee buu jirkaaga u galayaa sideese ugu wareejiyaa?
Sunshine op Coronavirus covid-19 iyo sayniska: Sidee buu jirkaaga u galayaa sideese ugu wareejiyaa?
SalmonInClick op Coronavirus covid-19 iyo sayniska: Sidee buu jirkaaga u galayaa sideese ugu wareejiyaa?
falanqeeyaan op Coronavirus covid-19 iyo sayniska: Sidee buu jirkaaga u galayaa sideese ugu wareejiyaa?